Track Beaches Near Me and XNUMX Best Track Beaches in Los Angeles
By ချိစ် စက်တင်ဘာလ 23, 2021 လူနေမှုပုံစံစတဲ့, ခရီးသွား0မှတ်ချက်
– Beaches Near Me –
The beach scene (particularly when you’ve had enough of the traffic) is one of the most appealing aspects of the Los Angeles area.
We put upalist of some of the greatest places to relax by the Pacific in the Los Angeles region, whether you haveadog, want to hang glide, want to snorkel or kayak, can’t get enough of catching waves on your surfboard, like birding or simply want to swim and snooze.
Aside from Hollywood and traffic, Los Angeles is perhaps best known in the popular imagination for its beaches.
The Los Angeles region boasts some of the most picturesque and recognized sections of coastline, from the tidal pools of the Palos Verdes Peninsula to the sandy sands of Malibu.
The sights and sounds of the Venice Ocean Front Walk and the Santa Monica Pier are likely familiar to both locals and visitors. But they aren’t the only beaches in Los Angeles; they’re just the busiest.
With that in mind, here are XNUMX beaches in the area ideal for swimming, sunbathing, bicycling, hiking, exploring, and whatever else you want to do on the beach.
XNUMX Best Beaches in Los Angeles
Below are some of the Beaches Near Me and XNUMX Best Track Beaches in Los Angeles:
It’salengthy drive out to this beach, which is just outside the Ventura County boundary, but the reward isadramatic, rocky beachfront with some of Southern California’s most beautiful sunsets.
Afterastroll in the nearby state park, you may cool down in the surf.
This is one of the Beaches Near Me.
El Pescador, La Piedra, and El Matador beaches are among the lesser segments of shoreline on this huge state beach.
The latter offers interesting rock formations and caverns to explore, and all three are excellent places for tide pooling and beachcombing.
XNUMX. Paradise Cove Beach
Paradise Cove Beach isasmall private-public beach nestled behind Malibu cliffs. The Paradises Cove Beach Cafe, which provides every amenity mostly sponsored the beach, but if you want to swim or surf, you may visit the beach free.
Many people come to rent private terraces, beach mattresses, and loungers and it’s one of the most peaceful places in Malibu if you can put the cash to them (the private patios may run over $XNUMX on the most expensive weekend day).
If you wantafantastic beach to spend your holiday, go to Paradise Bay from Escondido, and at sunset, you will have earnedaglass of rosé.
XNUMX. Venice Beach
Come to ဗင်းနစ်သဲသောင်ပြင် for the mile-and-a-half of silky sands where you can spreadablanket and gaze out into the Pacific.
Also, you can stay for the beloved Venice Beach Boardwalk, where street performers and vendors busk and sell their wares, muscle men lift massive amounts of weight, and subcultures congregate.
It’sabustling location for people looking foralittle action on their beach day.
XNUMX. Carbon Beach (Billionaire’s Beach)
Carbon Beach is notaprivate beach, but it has the sense of one. You’ll seeafew other people when you go behind the ultra-houses, rich’s but otherwise, this lengthy stretch of beach is about as isolated as Malibu gets.
ရေသည်တိတ်ဆိတ်။ ကျောက်စရစ်ခဲများမရှိသောကြောင့်ရေကူးရန်သင့်တော်သည်၊ သဲသည်ချောမွေ့ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသည်၊ မွန်းလွဲလုံးအနားယူရန်သင့်တော်သည်။ ကာဗွန်သဲသောင်ပြင်သည်ငြိမ်းချမ်းသောလမ်းလျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြေးခြင်းအတွက်စံပြဖြစ်သည်။
အတွင်းနေရာအနည်းငယ်ရှိသည် Malibu ခရီးသွားများနှင့်မပြည့်နှက်ပါ၊ ၎င်းသည်၎င်းတို့ထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုအခွင့်ကောင်းယူပါ။
6. Escondido ကမ်းခြေ - Malibu
Is thereamore secluded beach than “Escondido“? This, like Carbon Beach, isaprivate Malibu beach hidden behind opulent houses that tourists drive right past without even realizing it’s there.
The beach here is slightly smaller than at Carbon, therefore it’sagood idea to check tides ahead of time because high tide leaves the little area to spread outablanket.
Also, the walking, on the other hand, is fantastic, and the stroll from Escondido Beach west to the expensive Paradise Cove beach is popular with locals. There is no parking lot; instead, public parking is available along PCH.
Escondido Beach has two public access points: one at the bridge over Escondido Creek and the other near XNUMX Pacific Coast Highway.
XNUMX. Abalone Cove Beach
Despite being only an hour away, most Angelenos are unaware of this quiet, residential beach in Rancho Palos Verdes. This is one of the Beaches Near Me.
With several hiking paths andastate ecological reserve with protected cliffs that provideaspectacular view of the Pacific, Abalone Cove is delightful whether you want to take part in various activities or simply relax on the sand.
It has some of California’s greatest tidepools andahandful of enormous caverns to explore. Because of falling rocks and unstable cliffs above, some of the beach and tidal pool areas have been blocked, so check the map to ensure you’re inasafe place.
Barbecues and flames, as well as pets, are forbidden.
XNUMX. El Pescador Beach – Malibu
El Pescador is one of three Malibu beach treasures that comprise Robert Meyer Memorial State Beach (the other two being El Matador and La Piedra).
This is one of the Beaches Near Me. It has it all: sand, tidepools, restrooms, and even an extra hidden cove that visitors to this already secluded beach sometimes overlook.
Each of the three beaches in the group has its own sign, andadesignated (paid) parking area just south of the more well-known Leo Carillo. The westernmost of the three is El Pescador Beach.
A short trek downasteepish path from the parking lot at XNUMX Pacific Coast Highway is necessary to access the beach, which isasandy cove ringed by tidal pools.
XNUMX. Laguna Beach
Lower the windows and wrench up some Natasha Bedingfield as you leave The Hills and head down the coast towards Laguna Seashore.
The little and beautiful Orange Region town brags seven miles shore, with ocean caves, tide pools, seaside feigns, and normal tide pools, notwithstandingalot of sandy seashores on the off chance that you simply need to plunk down your umbrella and relax for the afternoon.
As the origination of skimboarding, an action like riding that includes coasting across the water’s surface to meet breaking waves as they come in, there could be no greater spot to takeastab at this outrageous game—or observe asapassive spectator while local people flaunt their abilities.
Make certain to twofold actually takealook at rules, as each seashore has its own arrangement on what exercises are allowed. This is one of Track Beaches Near Me.
Bow Narrows isafamous nearby seashore where you’ll see seals relaxing XNUMX yards seaward on Seal Rock, and skimboarding, scuba jumping, body surfing, tide pooling, and different exercises are permitted.
Thalia Road isatop choice among surfers, while Wood’s Bay and Darling’s Inlet have profound waters ideal for jumping and investigating tide pools.
XNUMX. Rincon Beach Park
San Diego မှ La Jolla ရှိ Dark's Seashore ကိုအများစုက California ၏ကမ်းခြေအလွတ်ကမ်းခြေများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်သိကြသော်လည်း မြောက် Rincon (ဒေသခံများအား Bates Seashore ဟုရည်ညွန်းသည်) သင်၏ tan လိုင်းများကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ဤကမ်းခြေကို Focal Coast တွင်အကောင်းဆုံးစီးနင်းရန်နေရာဖြစ်စေသောညာလက်လှိုင်းများကိုအသုံးချနိုင်သည်။
သုံးမိုင်ကမ်းခြေသည်အချို့အပိုင်းများတွင်စစ်မှန်စွာကန့်သတ်ပြီးကြမ်းတမ်းသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောသဲဆန့်ကျင်မှုဖြစ်လျှင် Rincon Park District Seashore သို့လမ်း ဖြတ်၍ သွားပါ။
ကမ်းခြေနှင့်အနည်းငယ်ပိုဝေးသော Carpinteria Feigns Nature Reserve သည်သင်လမ်းကြောင်းများနှင့် Carpinteria Seal Safe-haven Overview ကိုအောက်ခြေမှကြည့်လျှင်ပင်လယ်ဖျံများအောက်တွင်နေရောင်ခြည်များမြင်နိုင်သည်။
Naturists များသည်ပင်လယ်ကမ်းစပ်၏လိုသလိုဝတ်စားဆင်ယင်မှုအပိုင်းကိုလိုက်မီရန်အားကြိုးမာန်တက်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ခရိုင်ပန်းခြံရုံးနှင့်နယ်မြေရဲအရာရှိတို့မကျေနပ်မှုမှလွဲလျှင် nudists tag tag ကိုဖြတ်ရန်သဘောတူခဲ့သည်။
“ No Bareness” ဆိုင်းဘုတ်သည်ကမ်းခြေကိုညွှန်ပြသောအမြင့်ဆုံးတွင်ကျန်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများကိုသင်အနောက်ဘက်သို့ပေ ၁၂၀၀ ၀ န်းကျင်တွင်သင်က“ အဝတ်အစားကိုလိုသလိုရွေးချယ်သောဒေသသို့ ၀ င်သည်” ဟူသောသတိပေးသည့်အခြားဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကိုသင်ခြေရာခံလိမ့်မည်။ သူတို့ထောက်ခံတဲ့ဒေသရဲ့အစ
11. Terranea Cove ကမ်းခြေ - Rancho Palos Verdes
နောက်ကွယ်ကတိတ်ဆိတ်တဲ့တောအုပ်သေးသေးလေးကိုလူတိုင်းနားမလည်ဘူး Terranea အပန်းဖြေစခန်း သာမန်လူထုအတွက်လည်းရနိုင်ပါတယ်။
Terranea လမ်း၏ပထမဘယ်ဘက်ရှိဆိုင်းဘုတ်တင်ထားသောလစာတွင်အများပြည်သူအတွက်ကားရပ်ရန်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Terranea Cove သို့ခဏလောက်လမ်းလျှောက်သွားပါ။
မြောက်ဘက်ကမ်းခြေကဲ့သို့နွေးထွေးမှုကိုအမှန်တကယ်ငြီးငွေ့သွားစေသောငါတို့အတွက် Oxnard စိတ်ကူးယဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၁၅ ဒီဂရီပိုအေးပြီးအများစုမှာစွမ်းအင်သည်ငြင်းမရလောက်အောင်လျော့ရဲနေသည်။
LA မှတစ်နာရီသာကားမောင်းပါ၊ Oxnard တွင်စီးရန်နှင်းလျှောစီးအငှားများမှ Channel Islands များအထိခရီးများသွားခြင်း၊ ပျော်စရာများစွာရှိသည်။ Oxnard ၏ကမ်းခြေများ ကောင်းကင်အမြင်ကိုပေးပါ။
သီတင်းပတ်ကုန်မှာကမ်းနားအိမ်တစ်လုံးငှားဖို့စဉ်းစားနေလား။ Oxnard ၏ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ရှိကမ်းခြေများစွာကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သော်လည်း Oxnard Seashore ကိုယ်တိုင်ကဆုရနိုင်သည်။
ဒီနေရာမှာလှိုင်းလုံးတွေကလုံးဝကိုအံ့သြစရာကောင်းပြီးအဲဒါက picnicking၊ စွန်ပျံတာ၊ သဲစောင်းတွေပေါ်တက်တာနဲ့အခြားခွေးတွေကိုတအံ့တသြကြည့်တာတို့လိုထူးခြားတဲ့ Oxnard Seashore Park ရဲ့ဘေးစောင်းမှာရှိနေတာပဲ။
ရပ်တန့်ခြင်းသည်တစ်နေ့တာအတွက် (၅ ဒေါ်လာ) နှင့်များစွာအကျိုးရှိပြီးကျိုးနွံသည်။ Oxnard Seashore သည် Pacific Pacific စက်ဘီးသင်တန်းတွင်ရှိနေသောကြောင့်သင်၏ခွေးများကိုသင်ခေါ်ဆောင်လာနိုင်ပါသည်။
စုဖွဲ့ပျော်ပွဲစားအတွက်ကြိုတင်မှာကြားရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်နေရာ (၈၀၅-၃၈၅-၇၉၄၆) သို့ခေါ်ပါ။
Greater Los Angeles ဧရိယာတွင်လူသိအများဆုံးကမ်းခြေများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် စန်တာမော်နီကာမရ။ ၎င်း၏ရှည်လျားဖြူဖွေးသောသဲသောင်ပြင်များ၊ ဆိပ်ခံတံတား၊ ၎င်းနှင့် Annenberg ကွန်မြူနတီကမ်းခြေအိမ်တို့ကိုသတ်မှတ်ပါ၊ ၎င်းသည်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်လူများနှင့်အမြဲစည်ကားနေသည်။
Roller coasters, Segways, pancakes နှင့်ဇိမ်ခံဟိုတယ်များကို Santa Monica Beach တွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးသဲဖြူအချို့ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
14. Sunset ကမ်းခြေ - Orange County
Sunset Beach သည်အိမ်သာများနှင့်အသက်ကယ်အစောင့်များကိုပေးထားသည်၊ သို့သော်သင်၏အအေးခံစက်ထဲသို့သင်ယူလာသည့်အရာ မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမှမရှိပါ။ Huntington ကမ်းခြေသည်အနီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော်လည်း Sunset Beach သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မပါ ၀ င်သောဇနပုဒ်ဖြစ်သည် Orange County.
Anderson Street နှင့် Warner Avenue ကြား၊ Pacific Avenue ၏အနောက်ဘက်သည်ကမ်းခြေဖြစ်သည်။
အချိန်ကြာမြင့်ပြီးနောက် ကျောက်တံတား ကြီးမားသောတောမီးများကိုပိတ်လိုက်သည်၊ အချို့မှာနောက်ဆုံးတွင်ကမ်းခြေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးသုံးနိုင်ကြသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အနီးရှိကမ်းခြေများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်တွင်ကြီးမားသောမီးလောင်မှုသည်တရားမ ၀ င်ဖြစ်ပြီး Dockweiler ရှိသူတို့၏အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုသည်ဤကမ်းခြေကိုခွဲခြားသောလွယ်ကူသောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။
သင်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်လျှင်သင်၏ bar-b-que game ကိုထုတ်ပြီး Belcampo မှအသားအချို့ ယူ၍ မီးပေါ်မှအသားကင်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်ပါ။
Dockweiler တွင်အရက်ကိုခွင့်မပြုပါ၊ ရဲအပျော်စီးယာဉ်နှစ်စီးသည်ဘေးပတ်လည်တွင်လျှောကျနေသည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
ငါတို့အဲဒါကိုဘယ်အချိန်မှာမဆိုအခွင့်အလမ်းမပေးဘူး။ (မင်း Remiss မှာစားဖို့ကြိုးစားရင်ကလွဲရင်) Dockweiler နဲ့သိပ်မနီးစပ်ဘူး၊ ဒါကြောင့် BYO Cookout နေ့တစ်နေ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
၁၆။ Leo Carrillo ပြည်နယ်ပန်းခြံ
Leo Carrillo အမျိုးသားဥယျာဉ် မတ်စောက်သောကမ်းပါးများ၊ လမ်းလျှောက်ရန် Malibu မြစ်နှင့်သဘာဝရေကန်များစွာပါ ၀ င်သောကွဲပြားခြားနားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အနီးရှိကမ်းခြေများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်စံပြကမ်းခြေ ၁.၅ ကီလိုမီတာတွင်တည်ရှိသောလှိုင်းစီးသူများ၊ ရေကူးသူများ၊ ကမ်းခြေဧည့်သည်များ၊ လေလှိုင်းစီးသူများ၊ ငါးဖမ်းဝါသနာရှင်များနှင့်ကမ်းရိုးတန်းဆဲလ်များကိုစူးစမ်းလေ့လာသူများအတွက်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည်။
ကြီးမားသောသဖန်းပင်များဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောကမ်းခြေသည်အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော်လည်း Leo Carrillo ၏ရေသည်မည်သည့်ဧည့်သည်မဆိုလက်ခံနိုင်သည်။
Pigeon Forge တွင်လုပ်စရာများ
ထင်ရသော Malibu ၏ ဦး စီး ဦး တည်ချက် ဇူးမား လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ကမ်းခြေများကိုစဉ်းစားသောအခါအနောက်အလယ်ပိုင်းမှပုံတစ်ပုံချင်းစီမှပုဂ္ဂိုလ်များသည် Baywatch တစ်တန်ကိုပစ်ကြသည်။
ဇူးမားသည် LA တစ်ခုလုံးတွင်အကြီးဆုံးကမ်းခြေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်သောရှာဖွေမှုထဲသို့နစ်ရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသင့်သည်။ ပင်လယ်ထဲကိုတွယ်ကပ်နေတဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ Point Dume ကိုသင်တွေ့နိုင်မယ့်နေရာမှာလည်းဒီလိုပါပဲ။
သင်ကကျောက်တောင်တက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်သမုဒ္ဒရာခြင်္သေ့များအားပုံမှန်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောရှုထောင့်မှကြည့်ပါ။ ဇူးမား၏ဆူညံသံကြောင့်အခြားကမ်းခြေများထက်စျေးပိုရနိုင်သည်။ နွေရာသီနှုန်းများသည်မွန်းလွဲ ၁၀ ဒေါ်လာအထိတက်နိုင်သည် (ညအိပ်ရပ်နားခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ) ။
Malibu ဝိုင်တွင် Malibu Wines တွင် (သို့မဟုတ်) အဆုံးသတ်ရန်လိုသည်။ Malibu နေ့၌အရက်၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအဆင့်ဖြစ်သည်။
ခိုင်လုံသောအချက်များသည်လုံး ၀ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ဖြစ်ပြီး၊ ဖောက်သည်အခြေအနေကပိုများသည်။ သို့မဟုတ်သင်၏အတွေ့အကြုံအဖြစ်ပင်လယ်ဝိုင်နှင့်စျေးကွက်သစ် nibbles များပေါ်တွင်အရသာခံစားလိုသောအခွင့်အလမ်းတွင် Malibu Dock ရှိ Malibu Ranch စားသောက်ဆိုင်သို့သွားပါ။
၁၈။ Will Rogers ပြည်နယ်ကမ်းခြေ
ဖြန့်ရန်လုံလောက်သောသဲများပါ ၀ င်သောဤပန်းခြံသည် Santa Monica ဆိပ်ကမ်း၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ ထို့ပြင်ဤနေရာသည်ရေကူးရန်၊ ပျော်ပွဲစားထွက်ရန်သို့မဟုတ်ဘော်လီဘောကစားရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် (ဤနေရာတွင်ပိုက်များပေါများသည်)
၂၂ မိုင် Marvin Braude စက်ဘီးလမ်းကြောင်းသည်စတင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကမ်းခြေစူးစမ်းလေ့လာရန်ကမ်းခြေအပျော်စီးသင်္ဘော (သို့) တစ်စီးငှားပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အနီးရှိ Track Beaches များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၁၉။ Topaz Jetty
လူစုလူဝေးမှလွတ်မြောက်ရန်ရှာဖွေနေသလား။ ဟိ Topaz Jetty ၏တောင်ဘက်ဒေသ ကယ်လီဖိုးနီယားတောင်ပိုင်းရိုးရာကမ်းခြေတစ်ခုတွင်အေးချမ်းသောနေရောင်ရေချိုးသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သာယာအဆင်ပြေမှုများသည်အနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းသင် ပိုမို၍ ရှုပ်ထွေးပွေလီလိုလျှင်တိုတောင်းသောလမ်းလျှောက်ခြင်းသည်လှိုင်းစီးခြင်းအကြောင်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးရန်သဘောတူညီခဲ့သော creaking, tacky Redondo Beach Pier ဖြစ်သည်။
Topaz နှင့် Esplanade ရှိအများသုံးခြေလှမ်းများဖြင့်ကမ်းခြေကိုသွားနိုင်သည်။
20. Rosie ရဲ့ခွေးကမ်းခြေ
Rosie's Canine Seashoreငါတို့ပြောရတာ ၀ မ်းသာတယ်၊ အဲဒါကမင်းစိတ်ကူးထားတဲ့အရာပဲ။ လုံး ၀ ကြိုးမပါဘဲ Long Seashore ၏ Belmont Shore အာကာသ၌၎င်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Rosie's သည်ပျော်စရာကောင်းသောခွေးရူးပြန်ပွဲများကိုကျင်းပလေ့ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်မည်သည့်အချိန်မဆို“ Corgi Seashore Day” ကဲ့သို့သောအရာများအတွက် Facebook ကကြိုဆိုသည်။ စိုစွတ်သောစွယ်၌သင်အမှန်တကယ်သုံးဆောင်နိုင်သောအဓိကနေရာမှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။
ခွေးများအတွက်နာရီသည်နံနက် ၆ နာရီမှည ၈ နာရီဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်အမှန်အားဖြင့်ထိုအချိန်အပြင်ဘက်ကမ်းခြေ၌သင်၏အဖော်များကိုခွင့်မပြုပါ။
ဒါ့အပြင်ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာခြံခတ်ထားတာမရှိတာကိုသတိပြုပါ၊ အချို့အမှိုက်ပုံးအိတ်တွေကိုကွန်တိန်နာတွေကနေရနိုင်တယ်ဆိုတာသတိချပ်ပါ၊ အဲဒါကိုမင်းကိုယ်တိုင်ယူလာတာကောင်းပါတယ်။
အမှန်တကယ် LA ခရိုင်ဖြစ်သော Long Seashore တွင်ထမင်းစားသောက်ခြင်းရုံး၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာအရေအတွက်များရှိသည်။
မက္ကဆီကန်အစားအစာများကိုကြိုက်နှစ်သက်သူသည် Lola's သို့သင့်ကို ဦး ဆောင်သင့်သည်။ ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကြေငြာချက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်အစားအစာသည်အံ့မခန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အနီးရှိ Track Beaches များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၂၁။ Hermosa ကမ်းခြေ
ညဉ့်နက်သည် လှပသော ထိပ်ဆုံးရောက်ရန်ခဲယဉ်းသည်၊ ၎င်းတို့ကိုရှည်လျားသောအထိုင်အစွန်းမှသင်ရယူနိုင်သည်၊ သင်ချစ်သောသူကိုယူပါ၊ ငါတို့သည်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးရှိစေမည့်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုသေချာပေါက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Hermosa Cyclery သည်စက်ဘီးအနည်းငယ်ငှားရန်နှင့်သမုဒ္ဒရာလေကို ၀ င်စားရန်စိတ် ၀ င်စားလျှင်သင်၏နေ့ကိုစတင်ရန်မယုံနိုင်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ဟာကမ်းခြေဘော်လီဘော (သို့) တင်းနစ်ဝါသနာပါသူဖြစ်လျှင် Hermosa သည်သင့်အတွက်တရားရုံးများရှိသည်။
Hermosa Seashore Dock သည် Santa Claus Monica Wharf နှင့်ဆင်တူမည်သည့်အရာမှမရှိ၊ နေ ၀ င်ချိန်နှင့်ရှုခင်းများဆွဲဆောင်မှုမရှိ၊ နေရောင်ကျသောအခါထူးခြားသောရှုထောင့်အချို့ကိုတင်ပြသောအေးချမ်းသည့်အထိုင်ဖြစ်သည်။
Hermosa သည်မီးခိုးမပါ၊ အများပြည်သူနေရာများတွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အငွေ့ပျံခြင်း (သင်စိတ်ထဲရှိသည့်အရာကိုအနည်းငယ်စိတ် ၀ င်စားခြင်း) မရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
Hermosa ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွင်ပထမအဆင့်အစားအစာနှင့်အချိုရည်များ၊ အထူးသဖြင့် Baran's 2239 (Indian Egg)၊ Barsha (La Goulette ဂုံးများကိုလန်းဆန်းစေသောဝိုင်ဖြူ) နှင့် Palmilla Cocina Y Tequila (သခွားသီးjalapeño margarita ကို ယူ၍ ရှည်လျားစွာကြည့်ပါ။ ပင်လယ်၌) ။
မင်းရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့လိုအပ်ချက်တွေအတွက် all-in-one အရင်းအမြစ်အတွက် Abigaile ကိုနှိပ်ပါ၊ အစက်သည်အဖျော်ယမကာနှင့်စားသောက်ဆိုင်ပထမထပ်အဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီး၊ အထပ်မြင့်ခေါင်မိုးအကိတ်သမားအဖြစ်သို့ပြောင်းသွားသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အနီးရှိကမ်းခြေများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
၂၂။ Huntington မြို့ကမ်းခြေ
Huntington မြို့ကမ်းခြေ ၁၉၄၂ တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သော ၁၂၁ ဧကကျယ်ဝန်းသည့်ပန်းခြံအတွင်း၌တည်ရှိပြီးဤအရှည်၏အထင်ရှားဆုံးကမ်းခြေသည် Orange County ၏ tippity-top ကိုဖုံးလွှမ်းသည်။
၎င်းသည်၎င်း၏လှိုင်းစီးမှုအားလပ်ချိန်များ၊ နိုင်ငံတကာရေလွှာလျှောစီးပြတိုက်နှင့်တက်ကြွသောနေ့နှင့်ညတို့ကြောင့်နာမည်ကြီးသည်။ သင်တစ် ဦး ဘုတ်အဖွဲ့ငှားသို့မဟုတ်မျက်နှာသုတ်ပုဝါကဲ့သို့အများအပြားစားသောက်ဆိုင်များ, အရက်ဆိုင်, ဒေသခံဘီယာများနှင့်တော်တော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆိပ်ခံရှိပါတယ်။
ကမ်းခြေမှာမဟုတ်ရင်တောင်ဒေသခံအကြိုက်ဆုံး Normita's Surf City Taco ကိုမစမ်းဘူးဆိုရင်သင်ပေါ့ဆလိမ့်မယ်။
ကျော်လွန်၍ မရ Hermosa, Manhattan ကမ်းခြေ ညဥ့်အပိုင်း၌ရူးသွပ်သောအရိပ်များအချို့ကိုလည်းဖော်ပြလိမ့်မည်။
Marvin Braude Bicycle Trail, Polliwog Park (ပန်းကန်ဂိတ်အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေရာ) နှင့် Sand Rise Park တို့နှင့်အတူဤနေရာတွင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်တစ်ရက်တာကိုဖြတ်ရန်လွယ်ကူသည်။
တစ် ဦး ချင်းစီသည်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ရန်ကြီးမားသောဆင်ခြေလျှောကိုသုံးသည်၊ သို့သော်အရာအားလုံးထက်အခြားအရာ (လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း) ထက်ပိုကောင်းသောအချိန်ကိုသင်သိသလား။ Sandboarding လုပ်ခြင်း
ကမ်းခြေနှစ်မိုင်နှင့်ကားရပ်နားရန်နေရာ ၅၀၀ ခန့်သာရှိသောကြောင့်သင့်အတွက်အဆင်ပြေသောနေ့တစ်နေ့အတွက်အခွင့်အလမ်းများသည်။
South Straight seashores များသည် St Nick Monica နှင့် Venice တို့တွင်တွေ့နိုင်သောခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ပေါက်ကွဲသံမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်သင်ရှာဖွေနေသောအရာဖြစ်နိုင်သည်။
စားရမည့်နေရာတွင်သောက်ရန်: Manhattan Seashore Post သည်ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုကျော်လွှားရန်ဘေကွန် cheddar ပေါင်မုန့်လိပ်များနှင့် chimichurri စကတ်အသားတို့ဖြင့်ဟဲဗီးဝိတ်တန်းနံနက်စာချန်ပီယံဖြစ်သည်။ လူပြည့်လျှင်ဒိုင်းနမိုက်ဖြင့်ငါးဖမ်းခြင်းသည်မြို့၏အကောင်းဆုံးရေနံစိမ်းဘားဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောအချက်ကြောင့်အခြားမဖြစ်မနေလိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။
၂၄။ Point Dume ပြည်နယ်ကမ်းခြေ
အမှတ် Dume Malibu ၏တောင်ဘက်စွန်းတွင်ရှိသောပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲသို့ဆင်း။ ချစ်စရာကောင်းသောလခြမ်းပုံသောင်ပြင်သို့လျှောဆင်းသည်။
25. El Matador ပြည်နယ်ကမ်းခြေ
အယ်လ် Matador Angeleno သည်လေဆိပ်သို့ရောက်သည်နှင့်သင့်အားနှင်ထုတ်မည့်ကမ်းခြေအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
သင်သူတို့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ရန် (သို့) စူးစမ်းလေ့လာရန်သက်သက်သာဆုံးဖြတ်ပါကကျောက်များသည်ချော်ထွက်နိုင်သဖြင့်ရေစီးဖိနပ်ကိုသတိထားပါ။ El Matador သည်သဘာဝဘဏ္.ာဖြစ်သောကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အထောက်အပံ့များမရှိပါ။
Orland, FL တွင်လုပ်ရမည့်အရာများ
အောက်တိုဘာလတွင်လည်ပတ်ရန်အံ့သြဖွယ်နေရာ ၁၀ ခု
ဒီ Weekend မှာ DC မှာလုပ်စရာများ
Los Angeles တစ်ဝိုက်နှင့်အနီးဆုံးအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုများကိုသတိပြုပါ၊ လူတိုင်းအားမည်သို့အကျိုးကျေးဇူးယူရမည်နည်း။
နောက်ထပ်ဘာတွေလဲ၊ LA မှာ၊ ဒီမှာတောက်ပတဲ့နေ့ရက်တွေကိုတကယ်ရဖို့မခက်ပါဘူး၊ မင်းရဲ့နောက်ထပ်သဲအတွေ့အကြုံကိုဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့အချိန်ရောက်ရင်ငါတို့မှာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။
ဒါကြောင့် paddleboarding, surfing, swimming, ဒါမှမဟုတ်သဲထဲမှာနေပူစာလှဖို့ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေပေါများတဲ့ငါတို့ရဲ့လစ်ဘရယ်ကမ်းခြေကိုအသုံးချပါ။ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၏အေးမြသောအပူချိန်နှင့်အညီသင်အဆုံးစွန်ဆုံးပြောင်းလဲသွားမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အာမခံသည်၊ အထူးသဖြင့်ဆောင်း ဦး ရာသီမတိုင်မီခြောက်သွေ့သောအပူများသည်မခံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာသည်။
အထက်တွင်သင်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၌ ၀ င်ရောက်ရန်လိုအပ်သောကမ်းနားအစက်အပြောက်များနှင့်သင်ရှိနေစဉ်သင်စားသင့်သောနေရာများ မင်းသူတို့ကိုကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Tags:Los Angeles ရှိကမ်းခြေများပွင့်လင်းသည်, ငါ့အနီးကမ်းခြေ, la ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများ, laguna ကမ်းခြေ, ရှည်လျားသောပင်လယ်ကမ်းခြေ, Venice ကမ်းခြေ
မက်ဒေါ်နယ်ရဲ့ EBT ကိုလက်ခံပါသလား။ EBT အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
USC Keck ဆေးကျောင်း 2021 နောက်ဆုံးသတင်းများ - ကျူရှင်ကျသင့်သလား။
စုံတွဲများအပန်းဖြေအနားယူရန် Paris ၌အကောင်းဆုံး Romantic ဟိုတယ်များ
SunTrust ဘလော့ဂ် မူပိုင်ခွင့်© 2021 ။
theme အားဖြင့် MyThemeShop.	အပေါ်သို့ပြန်သွားရန်↑